Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan weerar bambaano oo geystay khasaaro kala duwan, kaas oo xalay ka dhacay Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Weerarkaan bambaano ayaa waxaa lagu qaaday Maqaaxi ku taalla Xaafada Kuba Ee Magalada Kismaayo, waxaana weerarkaas la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen Shan ruux oo Shacab ah.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in weerarkaasi bambaano, kadib Ciidamo ka tirsan Booliska Jubbaland oo aan ka fogeen halka uu bambada lagu tuuray ay rideen rasaas farabadan, in kastoo aan la xaqiijin khasaaro ka dhashay rasaastaas.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada Booliska Jubbaland ay xalay ilaa saakay Xaafada Kuba Ee Magalada Kismaayo ka sameeyeen howlgallo ay kusoo qabteen dad Dhalinyaro u badan, kuwaas oo saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in baaritaano lagu sameeynaayo.
Weerarada bambaano ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay ku kordheen Magaalada Kismaayo,waxaana sidoo kale Kismaayo ka dhacay 11-kii Bishii setember ee sanadkaan qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay Guddoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin
Next articleXOG: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Manta u baxaya safar dibadda ah